Boorama oo isku diyaarineysa raafka reer koofureedka | KEYDMEDIA ONLINE
Boorama oo isku diyaarineysa raafka reer koofureedka
Maamulka Somaliland ayaa Maalmahan ku howlan in degannadooda ay ka tarxiilaan dadka soo jeeda koonfurta Soomaaliya, iyagoo Magaalada Laascaanood ka soo masaafuriyey ku dhawaad 3,000 oo ruux.
BOORAME, Soomaaliya - Qorshe daba jooga kii Magaalada Laascaanood ee Gobolka Sool looga saaray Soomaalida ka soo jeedda Koonfurta Soomaaliya ayaa xilligan laga dareemayaa Magaalada Boorame ee Gobolka Awdal oo ka mid ah goobaha uu ka arrimiyo Maamulka Soomaaliland.
Jiritaanka dhaq dhaqaaqan ayaa waxaa warbaahinta u xaqiijiyey Xildhibaano ka tirsan Golaha Wakiilada Somaliland, kuwaa soo Maamulkaasi uga digay in ay ku dhiiradaan fulinta qorshahaasi oo ay ku tilmaameen mid ka hor imaanaya xeerarka dunida uga dagsan arimaha bani'aadminada.
Xildhibaan Maxamed Abiib, oo ka tirsan Golaha Wakiilada Somaliland, ayaa mar uu saxaafadda kula hadlayey Hargeysa waxa uu carabka ku dhuftay in ay heleen xog sheegeysa in Somaliland ay waddo qorshe ay si xoog ah Boorame uga saareyso dad ka soo jeeda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, isagoo ku taliyey in arintaasi laga baaqsado isla markaana ay tahay mid dhaawaceysa dastuurka u qoran iyo yoolka gooni isu taagga.
Xildhibankan ka midka ah Golaha wakiilada, ayaa tilmaamay, in ay hoos u dhacday sumcaddii ay Somaliland ku lahayd bulshada Soomaalida iyo tan dunidaba, waxana uu hoosta ka xariiqay in aysan aqbaleynin tallaabo kasta oo taasi la mid ah.
Qeybtii ugu horeysay ee dadkii todobaadkii hore sida qasabka ah looga soo daabulay Laascaanood ayaa shalay gaaray degaanna Maamulka Koonfur Galbeed oo ah halka ay ka so jeedaan, iyadoo qaar kalana ay qorsheynayaan in ay ka soo baxaan Puntland, waxana ay dalbanaya in laga caawiyo tasiilaadka safarka.
Somaliland ayaa fadeexo iyo dhalaaceyn ka dhaxashay raafkii ay ku sameysay dadkii ka soo jeeday Koonfurta Soomaaliya ee sugnaa Laascaanood, waxana dadkaasi oo tiradoodu gaareysay 3,000 oo ruux, sida uu Maamulka sheegay looga shakiyey qeyb ka ahaanshaha falal liddi ku ah amniga.
Maamulka Somaliland oo gooni isku taag ku dhawaaqay sanadkii 1991-kii ayaa meelaha uu ka arimiyo waxaa lagu tiriyaa goobaha Soomaaliya ugu amniga badan, waxana dad badan oo ka soo jeeda Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay daruufaha amniga iyo isbadalka cimilada ku xanbaareen in ay maciisadan degaannada Maamulkaasi.